I-Casa Ginestra, i-150 mt ukusuka elwandle - I-Airbnb
I-Casa Ginestra, i-150 mt ukusuka elwandle
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguLuisa
Indlu entle ekufutshane nolwandle embindini weCastro Marina.
GINETRA' - LA CICA RESIDENCE
- Iflethi okanye indlu ekwicomplex eqaqambileyo netofotofo equka igumbi lokuhlala elinesofa ekwayibhedi, igumbi lokulala elilala abantu ababini, igumbi lokulala elineebhedi ezimbini, igumbi lokuhlambela, ikhitshi negadi encinci.
Indawo enethamsanqa ikuvumela ukuba wonwabele ukubona ulwandle.
Iflethi inomatshini okhupha umoya obandayo okanye oshushu, i-wifi yasimahla nendawo yokupaka egciniweyo.
Unokufikelela elwandle uhamba ngeenyawo, kwimizuzu embalwa, ngenxa yezitepsi zendawo yokuhlala ezikhokelela kwindlela engaselunxwemeni apho kunokwenzeka khona ukufikelela kunxweme lwamatye.
Umbindi weCastro Marina, kunye nesikwere sayo esihle, umalunga neemitha eziyi-400 kodwa kufutshane ungafumana iibhari neevenkile zokutyela. Ukutya kunye namayeza kumalunga nemizuzu eyi-10 uhamba ngeenyawo.
Kwizibuko eliqhelekileyo embindini welali unokuqesha amacephe, iibhayisekile, ukuhamba ngeenyawo kunye nezikhephe kwaye ungabhukisha uhambo ngesikhephe ukuze ubuke unxweme oluhle kunye nemiqolomba ekhuselekileyo iZinzulusa kunye neRomaelli.
ICastro isembindini wonxweme lweSalento, ikwindawo efanelekileyo yokutyelela ezona ndawo zidumileyo kule ndawo. I-Otranto kunye neSanta Maria di Leuca, kunye namalwandle abo amahle anesanti, zikumgama wemizuzu eyi-30 xa uhamba ngemoto. Ikomkhulu elihle laseLecce naseGallipoli likumgama oziikhilomitha eziyi-45.
Esona sikhululo seenqwelo-moya sikufutshane eBrindisi, ekwikhilomitha eziyi 98 ukusuka eCastro. Kwisikhululo seenqwelo-moya kukho amathuba okuqesha imoto okanye uthathe isithuthi esiya eLecce uze uqhubeke ngebhasi ukuya eCastro.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Castro Marina